Barseloonaan Liyoonal Mesi irratti miidiyaa hawaasummaatiin namoota miidhaa geesisan qacaruusaa haaleera - BBC News Afaan Oromoo
Barseloonaan Liyoonal Mesi irratti miidiyaa hawaasummaatiin namoota miidhaa geesisan qacaruusaa haaleera
Kilabiin kubbaa miilaa Barseloonaan namoota taphatootasaa kan akka Meesii fi Piiqee irratti haasaa gaarii hin taanee miidiyaa hawaasummaarratti akka maxxansaniif qacaruusaa haaleera.
Buufanni raadiyoo tokko akka ibsetti kilabichi kabaja pireezidaant Jooseep Maariyaa Baartomu akka eegsisuu barbaaduu fi namoota isaan waliin walii hin galle immoo miidhuu akka barbaadu gabaaseera.
Buufanni raadiyoo 'SER Catalunya' jedhamu akka jedhetti kilabichi dhaabbata miidiyaa hawaasummaarratti ilaalcha kana galmaan gahuuf hojjata jedheera.
Barseloonaan garuu akaawuntii miidiyaa hawaasummaa kanneen waliin "hidhata qabaachuusaa haaleera".
"Kilabichi odeeffannoo maxxanfameef tarkaanfii saffisaa fudhachuu fi namootaa kabaja kilabichaarratti waan akkanaa raawwatamarrattis gama seeraan himannaarratti banuu isaa itti fufaa," jedha ibsi kun dabalataan.
Akka gabasaa raadiyoo 'SER Catalunya'tti dhaabbanni 'I3 Ventures' jedhamu "akaawuntootaa Feesbuukii fi Tiwiitaraa heddu" to'ata jedha.
Liyoonel Meesiin dhuguma Maanchister Siitii galuufii?
Moodriich badhaasa Baalendoor mo'ate
Gantoota Tapha Kubbaa Miilaa
Akaawuntii sanneen taphatoota akka Meesii, Piiqee, leenjisaa kilabichaa duraanii kan ta'an Peep Gaardiyoolaa, taphataa duranii Zaavii fi Kaarlees Paayol akkasumas namoota pireezidaantii Maariyaa morman mursaa fa'a irratti miidhaa geesisu jedha.
Gabaasni raadiyoo kanaa akka ibsetti Barseloonaan maxxansa sanneen "kabaja pireezidaantichaa fi biraandii eegsisuuf barbaachisaadha," jedhee yaada.
Barseloonaan gamasaatiin dhaabbanni 'I3 Ventures' jedhamu kilabicha tajaajila kan kennuudha malee "akaawuntoota eeraman waliin hariiroo tokkollee hin qabu jedheera. Akkasumas kilabichi hariiroo akkanaa jira yoo ta'e saffisaan walii galtee qabnu diignee hojiisaatiif mmoo itti gaafatamaa gochuuf gara seeraa ni deemna."
Dablataanis: "Kilabiin Barseloonaan miidiyaa hawaasummaarratti erga waa'ee dhaabbaticha mataasaarratti gaarii fi gaarii hin taanee to'achuuf kan gargaaru tajaajila akka qabu mirkaneeseera."
Barseloonaan "kabaja kana eegsisuunii barbaachisaa fi itti gaafatamummaa namoota dhaabbatichaaf hojjataniiti".
Gaardiyoolaa: Liyoonel Meesiin tapha kubba miilaa Baarseloonaatti xumura
8 Guraandhala 2020
Viidiyoo, ''Biraaziil biyya kubbaa miilaa taatus kan baay'inaan taphatu dhiirota qofa''
Mootummaan naannoo Amaaraa namni danda'u hundi akka adda waraanaatti duulu gaafate
Deeggarsi naannoo Tigraay akka hingeenye maaltu dhorke?
Namni adabbiin du’aa itti murtaa’ee eeggachaa ture dhukkubsatee du’e
'Weerarri TPLF balaa jiraachuu uummata keenya mudatedha' jedhe Naannoon Amaaraa
Namichi talaallii Covid-19 irratti qoosaa ture vaayirasichaan du’e
Tuniiziyaan Olompikii Tookyoo irratti meedaaliyaa warqii fi meetii Afriikaaf argamsiiste